Tag: bogga hore | Martech Zone
Sida loo adeegsado ereyada muhiimka ah wax ku ool ah SEO iyo Inbadan
Talaado, Oktoobar 17, 2017 Talaado, Oktoobar 17, 2017 Douglas Karr
Mashiinnada raadinta waxay ka helayaan ereyo muhiim ah qaybaha kala duwan ee bogga waxayna u adeegsadaan inay go'aamiyaan in bogga lagu qoro natiijooyinka qaarkood iyo in kale. Isticmaalka saxda ah ee ereyada muhiimka ah ayaa ka dhigaya boggaaga in loo qoro baaritaanno gaar ah laakiin ma damaanad qaadayo meeleyn ama darajo ku jirta raadintaas. Waxaa sidoo kale jira qaladaad keyword caadi ah oo laga fogaado. Bog kasta waa inuu bartilmaameedsadaa ururinta ereyada muhiimka ah. Aniga aragtidayda, maahan inaad bog leedahay
In kabadan 20% Fursadaha Boggeenna Guriga ah waxay ka yimaadaan Hal Muuqaal
Khamiis, Maarso 10, 2016 Khamiis, Maarso 10, 2016 Douglas Karr
Waxaan iska qornay Hotjar oo waxaan ku sameynay tijaabooyin kuleyl ah boggayaga hore. Waa bog deg deg ah oo dhameystiran oo leh qaybo badan, xubno, iyo macluumaad. Hadafkeenu maahan inaan dadka jahwareerino - waa inaan bixino bog abaabulan oo martidu ka heli karto wax kastoo ay raadinayaan. Laakiin ma helayaan! Sideen ku ogaan karnaa? In kabadan 20% kaqeybqaadashada dhamaan boggaga gurigeena waxay ka timid baarka raadinta. Iyo dib u eegista
12 Su'aalood Oo Loogu Talo Galay Naqshadeynta Bogga Hore
Talaado, Febraayo 19, 2013 Talaado, Febraayo 19, 2013 Douglas Karr
Shalay, waxaan la yeeshay wadahadal cajiib ah Gregory Noack. Mawduuca wadahadalka wuxuu ahaa mid fudud laakiin muhiim u ah shirkad kasta & bogagga guriga. Boggaaga hoyga ayaa ah bogga ugu horreeya ee soo degaya booqdayaasha boggaaga, sidaa darteed waa muhiim inaad si wanaagsan u qaabeyso. Waxaan hada ka hirgalineynaa goob cusub hay'addeena waxaana Greg la yimid qodobo aad u wanaagsan oo naga dhigaya inaan hagaajino qaar ka mid ah nuqulkeena iyo walxaha. Uma maleynayo qoris
WordPress: Ku Samee Bog Guri 3 Tallaabo oo Fudud
Sabtida, Janaayo 13, 2007 Khamiis, Juun 9, 2015 Douglas Karr
Waxaan ka shaqeynayay goob saaxiib ah maanta oo lahaa WordPress laakiin wuxuu doonayay bog fudud oo guriga ah halkii uu ka noqon lahaa bog guri isagoo adeegsanaya qoraaladii ugu dambeeyay ee blogka ah. Tani runti waxtar ayey leedahay haddii aad jeclaan lahayd in balooggaagu qayb ka ahaado bartaada halkii ay ka noqon lahayd bogga oo dhan. Asal ahaan waad u isticmaali kartaa WordPress sidii CMS. Hoosta waxaan xoogga saaray '3 Tallaabooyin fudud' marka haddii aad tahay horumariye horumarineed oo adeegsada WordPress,